Lọ Mposi, Ejiri Eke Mgbaaka, Mgbaze Mposi Plastic - Haorui
Ime ụlọ na n'èzí
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20, HAORUI na-akwado nkwado ogologo oge na isi ụlọ ahịa na-eduga na Europe, dị ka LIDL, ALDI, EDEKA, NORMA, NETTO, ROSSMANN na ihe ndị ọzọ. nkwa. Ugbu a HAORUI na-ekwukarị na ngwaahịa atọ dị mkpa bụ ngwaahịa, ụlọ ịsa ahụ, Egwuregwu na Ahụike, Osisi ụmụaka.
Zuo ike ndu gi
Nicebọchị mara mma na-amalite ebe a. Anyị dị iche iche ụlọ ịsa ahụ onunu ga-eme ka ime ụlọ ịwụ gị Cleaner na-adaba adaba. Ihe dị iche iche na atụmatụ dị iche iche na-egosi ụdị gị pụrụ iche. Busybọchị na-ekwo ekwo na-akwụsị ebe a. Elikpụrụ a pụrụ ịdabere na ya bụ nkwa anyị na-adịghị agbanwe agbanwe. Ọdịdị mara mma na mmetụta ngwaahịa na-eme ka ọnọdụ gị ka mma. Biko wetuo obi n'oge a.
Chebe ndụ gị
Site na ojiji a na-ejikarị eme egwuregwu kwa ụbọchị na egwuregwu, ndị otu anyị nwere ike ịnye atụmatụ dabere na ezigbo ịchọrọ maka ọrụ dị iche iche na iji nzube: Nchedo egwuregwu maka akụkụ ahụ dị iche iche, aka uwe maka ikpo ọkụ na mkpakọ, akwa na-arụ ọrụ na yarn na-enye mmetụta pụrụ iche, ụkwụ Nlekọta, ọgwụgwọ oyi na okpomọkụ, Ọkpụkpụ na enyemaka ahụike ... Mee nhọrọ gị kpamkpam, anyị nọkwa n'azụ gị.
Mee ka ndụ gị ka mma
Ihe eji egwuri egwu n’elu osisi na-enye umuaka ohere nke ha nwere ike weputa ahihia na oke oke nke echiche ha; Ihe egwuregwu ụmụaka nwere ike ime ka ụmụntakịrị ndị ọzọ na-emekọrịta ihe ma na-akwalite ịkekọrịta na imekọ ihe ọnụ; Ihe egwuregwu ụmụaka ndị e ji osisi rụọ na-enyekwa njikọ dị na mbara ụwa maka ụmụaka ... Ihe egwuregwu ụmụaka anyị niile mara mma nwere ike ime ka ndụ gị na nke ezinụlọ gị ka mma.
Uru Hebei Haorui
Ndị a bụ ụfọdụ ihe kpatara ị jiri họrọ Hebei Haorui
Na-arụpụta ihe ọhụụ na ọrụ na atụmatụ dị iche iche dabere na mkpa ndị ahịa ọ bụla.
Arụ ọrụ ọ bụla usoro nke dum iji si ase ka loading loading.Offer ahịa saa mbara na kpọmkwem ọrụ.
Muta ihe banyere HAORUI
Nyochaa ma lekọta usoro dum nke mmepụta, Gbaa mbọ hụ na ngwongwo nyefere na ọnọdụ kacha mma.
HAORUI nwere asambodo zuru oke na sistemụ nyocha, na-akwado ndị di na nwunye nke ụlọ ọrụ nke atọ na ụlọ nyocha-SGS, BV, Hohenstein, TUV, Intertek na ndị ọzọ. nke nwere BSCI, SEDEX, ISO, FDA na Oeko-tex, GS, CE, PEFC, FSC asambodo, nkwa mmesi obi ike bu ihe omuma Haorui maka ahia niile.